Izindaba - Ulwazi oluthile mayelana nephedi yokuchama/iphedi lomdlwane
I-Tianjin Jie Ya Women's Hygiene Products Co. Ltd., inhlanganisela yokukhiqiza nokuhweba yasechina futhi ikhethekile ngemikhiqizo Yenhlanzeko iminyaka engaphezu kwengu-25 nge-CE&ISO.Iphinde ibe neminyaka engaphezu kwengu-7 yokuthekelisa kanye nesipiliyoni sephakheji yomkhiqizo we-OEM.
Imikhiqizo yethu eyinhloko inabukeni labadala, inabukeni lebhulukwe labadala, ngaphansi kwephedi, i-pet pee pad, ama-napkins we-sanitary, i-panty liners.Hope singasebenza ndawonye ukuze sikulethele izidingo ezithile ngokwezifiso kanye nemajini.
Kulokhu sizokhuluma kabanzi nge-puppy pad.
Ezinjeni ezincane ezishiya i-ounce noma amabili kuphela isikhathi ngasinye, ungashiya iphedi ngaphandle usuku lonke noma ngezinye izikhathi ngisho nezinsuku eziningi.Ngaphandle kwalapho unezingane ezincane ekhaya, ayikho ingozi yokushiya iphedi eselisebenzile ngaphandle, kodwa kungase kungabi mnandi uma iphunga likhula.
Kufanele uyishintshe kangaki indawo yokuchama yenja?
Nakuba impendulo eqondile izohluka kumdlwane ngamunye, ngokuvamile kuwumqondo omuhle ukushintsha iphedi ngemva kokusetshenziswa kabili noma kathathu.Lokhu kuzovimba indawo yebhodwe ekubeni inuke kabi.Izophinde ivimbele umdlwane ukuthi ungangeni emfuleni wawo ngephutha- into AKUKHO OYIFUNAYO.
Umdlwane ungachama kangaki kuphedi?
Thatha umdlwane wakho uwuyise ebhodweni njalo.Kukangaki kuzoncika eminyakeni yakhe namandla esinyeni.Emidlwaneni emincane kakhulu, kungaba njalo njalo emizuzwini eyi-15.
Kufanele usebenzise isikhathi esingakanani ama-puppy pads?
Kufika emahoreni ayi-12 ezinyangeni eziyi-12 ubudala.Hhayi ukuthi uhlale ufuna ukulinda amahora ayi-12… Iphuzu liwukuthi kufanele bakwazi ukuyibamba ngaleso sikhathi uma kudingeka ngempela.
Ungakwazi yini ukuqeqesha inja ukuthi isebenzise amaphedi wokuchama futhi iphumele ngaphandle?
Uma indawo yakho yokugezela yasendlini ikude nomnyango, sondeza kancane amaphedi wokuchama eduze komnyango isonto nesonto.… Ekugcineni uzohambisa iphedi yokuchama eduze komnyango, bese ngaphandle komnyango uye endaweni yakhe yokuchama yangaphandle.Ngemuva kwalokho ungenziwa ngama-pee pads.
Ingabe amaphedi achama ayadida izinja?
Lokhu kudideka kungalibazisa umkhuba ofisa ukuwubamba baze baphumele ngaphandle.Futhi, umdlwane wakho ungase uncike kumaphedi awo wokuchama.Kungaba inqubo ende ukudlulisa imikhuba yenja yenja yakho kusuka kumaphedi e-pee angaphakathi kuya ngaphandle kuphela.
Isikhathi sokuthumela: May-24-2022
Ama-Lady Pads, I-Sanitary Pad 245mm, I-Negative Ion Sanitary Napkin, Female Sanitary Pad, Ithawula Abesifazane Abathambile, I-Cotton Sanitary Pad,